Beechcraft ကို C-45G USAF FS2004 DOWNLOAD - Rikoooo
အရွယ် 17.1 ကို MB
downloads ရယူရန္ 8 153
Author: Cliff Presley ဆီမှာဆိုရင်
အဆိုပါ Beechcraft ကို C-45G USAF အမြင့်ဆုံးအရည်အသွေးပါ! တစ်ဦး 3D လေယာဉ်မှူးအခန်းအသေးစိတ်အတူ။
တစ်ဦးကအရေးတကြီးကို download လုပ်ပါရန်ရှိသည်ရမယ်!
အဆိုပါ Beechcraft မော်ဒယ် 18 / 45 အမေရိကန်နှစ်ဦးကမ္ဘာစစ်ပွဲများအကြားကာလအတွင်းဖွံ့ဖြိုးတဲ့အင်ဂျင်နှစ်လုံးတပ်အလင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလအတွင်းအလွန်ကြီးမားစီးရီးအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်များအဖြစ်ထုတ်လုပ်ပေမယ့်လည်းလေ့ကျင့်သူသည် 1969 စက်ရုံမထွက်ခွာမီတစ်ဦးအလွန်ရှည်လျားအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမဟုတ်ဘဲပြီးခဲ့သည့်မိတ္တူရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ပြင် Beech ကို AT-11 Kansan တူအထူးပြုဗားရှင်း, အမွှာ Beech လည်းမြောက်မြားစွာ Re-Engineering turbopropulsées၏ဘာသာရပ်ခဲ့သည်။
C-45G: 96 ယူနစ် (51-11504 / 11599, c / n AF-61 / 156)2လေယာဉ်မှူးများနှင့်3ကျောင်းသားများအတွက်လေယာဉ်သွားလာမှုလေ့ကျင့်ရေးအဖြစ် repackaged ။ (ဝီကီပီးဒီးယား)